Abidy foinikiana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Abidy fenisiana)
Ny abidy foinikiana na abidy foenikiana na abidy fenisiana, izay antsoina hoe abidy prôtôkananeana koa, dia abidy tsy ahitana zanatsoratra fa abjady. Nampiasaina tamin'ny fanoratana ireo fiteny tao amin'ny faritr' i Kanaana, indrindra ny fiteny foinikiana (na fenisiana) izay fiteny semitika nampiasana tamin'ny kolontsaina fenisiana. Na dia tsy ahitana zanatsoratra aza io abidy io dia misy ihany litera nanoratana zanapeo taty aoriana, izany fomba izany no atao amin'ny teny latina hoe mater lectionis.
Ny abidy fenisiana dia lasa rafi-panoratana nampiasaina indrindra ka nampitain'ny mpanao raharaham-barotra fenisiana tamin'ny tontolo manodidina ny Ranomasina Mediteranea izay nivoarany sady noraisin'ny vahoaka samy manana ny kolontsainy. Ny abidy arameana, izay endrika misy fiovan'ny abidy fenisiana no nipoiran'ny abidy arabo ankehitriny, fa ny abidy hebreo kosa dia karazan'ny abidy arameana. Ny abidy grika (sy ireo abidy hafa nipoitra taminy toy ny abidy latina sy ny abidy sirilika ary ny abidy kopta) dia mpandimby mivantana ny abidy fenisiana, na dia novana aza ny fomba fanononana ny litera sasany mba hanoratana ny zanapeo ka lasa zanatsoratra.
Ny literan'ny abidy fenisiana dia manana endrika mizoro sy mahitsy, na dia nisy ny endrika boribory izay nipoitra miandalana, ka tafapaka amin'ny fara tampony izany tamin'ny fitrangàn'ny abidy ponika vaovao tao Afrika Avaratra. Ny fitehy foinikiana na fenisiana dia soratana avy ankavanana miankavia, na dia misy lahatsoratra sasany voasoratra miankavia avy eo miankavanana avy eo miankavia ... isaky ny miova andalana.
Tabilao maneho ny literan'ny abidy foinikiana sy ny litera mifandray amin'ireo ao amin'ny abidy hafa
Litera Anarany Heviny Latina Vakiny Litera mifandray aminy amin’ireo abidy hafa
Hebreo Siriaka Arabo Grika Latina Sirikika Armeniana
ʾālef omby ʾ [ʔ] א ܐ ﺍ Α α A a А а Ա ա
Bēth trano b [b] ב ܒ ﺏ Β β B b Б б, В в Բ բ
Gīmel rameva g [g] ג ܓ ﺝ Γ γ C c, G g Г г Գ գ
Dāleth varavarana d [d] ד ܕ ,ظ,ﺩ,ذض Δ δ D d Д д Դ դ
Hē lela varavarana h [h] ה ܗ ه Ε ε E e Е е, Є є Ե ե, Է է
Wāw lelam-pintana w [w] ו ܘ ﻭ (Ϝ ϝ), Υ υ F f, U u, V v, W w, Y y (Ѵ ѵ), У у Վ վ, Ւ ւ
Zayin fitaovam-piadiana z [z] ז ܙ ﺯ Ζ ζ Z z З з Զ զ
Ḥēth rindrina ḥ [ħ] ח ܚ ﺡ,خ Η η H h Հ հ
Ṭēth kodiarana ṭ [tʼ] ט ܛ ﻁ Θ θ (Ѳ ѳ), Ф ф Թ թ
Yōdh tanana y [j] י ܝ ﻱ Ι ι I i, Ï ï, J j И и, Й й Յ յ, Ի ի
Kaf felan-tanana k [k] כ ܟ ﻙ Κ κ K k К к Կ կ
Lāmedh tehina l [l] ל ܠ ﻝ Λ λ L l Л л Լ լ
Mēm rano m [m] מ ܡ ﻡ Μ μ M m М м Մ մ
Nun bibilava n [n] נ ܢ ﻥ Ν ν N n Н н Ն ն
Sāmekh trondro s [s] ס ܣ ﺱ Ξ ξ, Σ σ/ς, Χ χ X x (Ѯ ѯ), Х х Խ խ
ʿayin maso ʿ [ʕ] ע ܥ ﻉ Ο ο O o О о Ո ո, Օ օ
Pē vava p [p] פ ܦ ﻑ Π π P p П п Պ պ, Փ փ
Ṣādē papirosy ṣ [sʼ] צ ܨ ﺹ (Ϻ ϻ, Ϡ ϡ) Ц ц, Ч ч Չ չ, Ճ ճ, Ց ց, Ծ ծ, Ձ ձ, Ջ ջ
Qōp rajako q [q] ק ܩ ﻕ (Ϙ ϙ) Q q (Ҁ ҁ) Ք ք
Rēš loha r [r] ר ܪ ﺭ,غ Ρ ρ R r Р р Ր ր, Ռ ռ
Šin masoandro š [ʃ] ש ܫ ﺵ Σ σ / ς S s С с, Ш ш Ս ս, Շ շ
Tāw eto, ankehitriny t [t] ת ܬ ﺕ,ث
Avy amin' ny abidy fenisianina ny abidy grika. Tsy soratana ao amin' ny abidy semitika ny zanapeo. Amin' ny maha fiteny semitika ny fiteny fenisianina dia azo vinavinaina ny zanapeo miaraka amin' ny renifeo iray. Ny litera tsirairay ao amin’ ny abidy fenisiana dia nomena anarana araka ny teny anombohan’ ny feo asehon’ io litera io. Noho izany, ny ʾaleph, izay midika hoe "ombilahy", dia nanome ny anarany amin’ ny litera voalohany ao amin’io abidy io, ny bet ("trano"), izay nanome ny anarany ho an’ ity litera ity, dia toy izany hatranihatrany.
Fenisia na Foinikia
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Abidy_foinikiana&oldid=1002028"
Dernière modification le 8 Martsa 2021, à 06:59
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 06:59 ity pejy ity.